अर्थ / वाणिज्य – Page 50 – Radiokathmandu अर्थ / वाणिज्य – Page 50 – Radiokathmandu
सुनचाँदीकाे मुल्य घट्याे
१२ असोज, काठमाडौं । आइतवार छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महास‌ंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आइतवार छापावाल सुनको मूल्यमा प्रतितोला ६ सय रुपैयाँको गिरावट आएको…
आइतबारका विदेशी मुद्रा सटहि दर यस्ताे छ
१२ असोज, काठमाडौं । आइतबार नेपाल राष्ट्रबैंकले साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ १८ पैसा तोकेको छ । कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३१…
कुमारी बैंकको सेयर रजिष्ट्रारमा कुमारी क्यापिटल नियुक्त
१० असोज काठमाडौं । कुमारी बैंकको सेयर रजिष्ट्रारमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । अब कुमारी बैंकको सेयर सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, नामसारी, दाखिल खारेज गर्नेलगायत सम्पूर्ण कामहरु कुमारी क्यापिटलले गर्नेछ । कुमारी क्यापिटलले भदौ…
शुक्रबार सुन चाँदीकाे मुल्य घट्याे
१० असोज, काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मुल्य घटेको छ । विहिबार प्रतितोला सुनको मुल्य ७१ हजारमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज प्रति तोला २ सयले घटेर ७० हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी…
कहाँबाट साट्ने दशैँकाे लागी नयाँ नाेट ?
१० असोज, काठमाडौं । आजदेखि दशैंका लागि नयाँ र सुकिला नोट साट्न पाइने भएको छ । असोज १७ गतेसम्म राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका शाखाहरु वा आफ्नो खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट…
सिटी एक्सप्रेस र ईजी रेमिटबीच रेमिटान्स कारोबर शुरू
१० असोज, काठमाडौं । बेलायतको ख्यातिप्राप्त रेमिटान्स कम्पनी ईजी रेमिट र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फरबीच रेमिटान्स कारोबर शुरू भएको छ । उक्त सम्झौतामा सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र…
बिहीबार सुनचाँदीको मुल्य घट्याे
९ असोज, काठमाडौं । सुनको भाउ बिहीबार तोलामा एक हजार रुपैयाँ घटेको छ । सुन बिहीबार तोलाको ७१ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ । बुधबार तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेर तोलाको…
कोरियन वन बाहेक सबै विदेशी मुद्राको मुल्य बढ्याे
९ असोज, काठमाडौं । बिहीबार कोरियन वन बाहेक सबै विदेशी मुद्राको सटहि मुल्य बढेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्रबैंकले साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३८पैसा तोकेको छ । हिजो…
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सकाे एजेन्सी अवार्डस् नाईट दोस्रो संस्करण सम्पन्न
८ असोज, काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आ.व. २०७५/७६ मा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताहरुको प्रोत्साहन र सम्मान स्वरुप एजेन्सी अवार्डस् नाईट दोस्रो संस्करण सम्पन्न गरेको छ । दरबारमार्ग काठमाण्डौ स्थित…
बुधबार विदेशी मुद्रा सटहि दर यस्ताे छ
८ असोज, काठमाडौं । बुधबार नेपाल राष्ट्रबैंकले साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा तोकेको छ । बुधबार कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा र…